အိန္ဒြာ: အသံကြောင့်သေသွားရတဲ့ သီချင်း(အသံထွက်တဲ့ကဗျာ/ကဗျာပဟေဠိ)
အခု ဒီ အသံကြောင့်သေသွားရတဲ့ သီချင်း ဆိုတဲ့ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး.. ပဟေဠိ တစ်ခုဖွက်ရင်း.. အံ့သြကြည်နူးစရာလေးတစ်ခု ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
ဒီနေ့ကဗျာတင်ပြီး.. ညနေလောက်ရောက်တော့ မေးလ်ထဲကို အသံဖိုင်လေးတစ်ဖိုင် ရောက်လာပါတယ်..။ ဖွင့်လိုက်တော့ ကိုယ့်ကဗျာကို သေသေချာချာလေး ရွတ်ထားတာ.. အသံကလဲ ကြည်လင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလိုက်တာ..
နောက်တော့ ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်လဲ မှတ်ချက်လေးလည်းပေးကြပါဦး...
စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ပေါ့.. :P
ကဗျာ ရွတ် တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုးးး....း)
ဟီးးးးး :D :D :D
သည် ဘလော်ဂါနံမည်က “မ”နဲ့ စတယ်လေ....
နားထောင်သွားတယ် မရေ... အဲဒီလို ကိုယ့်ကဗျာကို ရွတ်ပေးတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ။
အသံတော့ မခန့် မှန်းတတ်ပါဘူး။
မကြားဖူးသလို ကြားဖူးသလို ..
၁- အစ်ကို မိုးကုတ်သား
၃- ကို ကလိုဆေးထူး
၆- ကို Z
၉-ကို လင်းဦး (စိတ်ပညာ)
၁၃- ကို လုလင်ငယ်သွေး
:D .... မောသွားပြီ ...မ။။။။ မှန်မှန်မှားမှား တွေ့ ရင် မုန့် ဝယ်ကျွေးရမယ်နော် :P
၁၆- ကို မိုးမြင့်တိမ်
၁၇- ဆရာ တောကျောင်းဆရာ ( စကားမစပ် ဆရာ့ရဲ့ဘလော့ဝင်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်နော်)
၁၈- black dream ( ဆရာ တော့ ဆရာ နာမည်မသိလို့:P )
၂၀ - ကို minn
ဒီတစ်ခါ တကယ်မောသွားပြီ မ ...ဦးနှောက် :P
အယောက် ၂၀ မ မှန်သေးဘူးဆိုလဲ ဇွဲမလျှော့ ပါ ။ ထပ်ကြိုးစားဦးမှာ။ :)
၁၆- ကို မိုးမောင် မှာ ကို မေ့ နေခဲလို့ထပ်ပြောတာပါ။
မ တကယ် ငိုချင်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့်စဉ်းစားဦးမယ် နော် မ။ ချက်ချင်း အဖြေမပေးလိုက်ပါနဲ့ ဦး။
အင်း အဲလို ပဟေဠိဖွက်တယ်ဆိုရင်တော့ အသံကြားဖူးတဲ့ ဘလော့ဂါပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်..။ အမစိတ်ထဲတော့ မှန်းမရ..။ ဘာလို့ဆို ဘလော့ဂါထဲက အသံကြားဖူးတာ တယောက်မှ မရှိလို့။ ကြားဖူးတဲ့ တယောက်နှစ်ယောက်ကလည်း မဖြစ်နိုင်။ နည်းနည်းဆင်တဲ့ အသံဆိုရင်တော့ "က"နဲ့ စတဲ့ ဘလော့ဂါပဲ ရှိတယ်။ ဒါလည်း သိပ်တော့ မနီးစပ်လှ။ :D
မောင်မိုးနဲ့ အွန်လိုင်းထဲ ဂီတာတီးရင်းပြောတာ
တစ်ကြိမ်...အရင်က အိမ်မက်ရှင် ဘလော့ဝရမ်းပြေးမဖြစ်ခင်ကပြောဖူးတယ်
ရွေးစရာက ၃ ယောက်တည်း (ပိုင်တယ်နော်)
ဒီလောက် သူ့ ဟိုဒင်းဟိုဟာကိစ္စတွေနဲ့
အစ်မ ကိုရင်နော် ရွတ်ထားတာလို့ ထင်ပါတယ်..။
က နဲ့ စတာ....
မ ကိုရင်နော်ပေါ့ ...
မယ် က နဲ့ စတာ သူတစ်ယောက်ပဲ သိတယ်။ :D
သြော်.... ကဗျာကြောင့် သေသွားရတဲ့ အသံပါလားနော်... ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ.. :D
က နဲ့စတာက မမမေငြိမ်းပြောသွားတာလေ....
နင့် ဆိုက်ဘားက Blogger list တွေရယ်..
မယ်ကိုးရေးထားတဲ့ List ရယ်..
ခင်လေးက သူ့ဘာသာ သွားပေါက်ချင်လို့ ရယ်တာနေမှာပေါ့...
(ရယ်ရယ်မောမောနေတတ်တယ် ပြောတားP)
ကျွန်တော်သိတယ် ဒါ ကိုရင်နော်...
နင့် မောင် နဲ့တိုင်ပြောမယ်
ဆရာမ မယ်ကိုး တစ်ယောက်ပဲမှန်တယ်
ကျုပ်ကပါ အထင်ခံရတဲ့ထဲ ပါနေပါ့လား..!!
စောတင်မောင် လို အထင်ခံရ နည်းလား ဆိုပြီး ငြိမ်နေမှထင်တယ်.. အဟေးးဟေး..း))
ဒါ ကိုမိုးမောင်ကြီး ဖြစ်ရမယ်..း)
မအိန္ဒြာ.. လူတွေကို တော်တော် ခေါင်းစားအောင် လုပ်တာပဲ....
ပျော်တော့ ပျော်စရာပါ..း)
ဟေး ...ပျော်တယ်။ မှန်တယ် မဟုတ်လား မ... :D :D :D :D :D ... ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး ...:P
အဖြေပြောပါတော့ ဗျို့...မပြောရင် ခဲနဲ့ပေါက်တော့မှာ..ဟီး..
လင်းဒီပ ခဲနဲ့တော့ မပေါက်ပါနဲ့..
ဒါ ဦးနော် ရဲ့အသံပါ
သူ့ဦးနော်တဲ့ ပြောပုံက .. ဒင်းတစ်ယောက်ထဲ နာ့ဦးနော်ကို ပိုင်တာကျလို့ .. စကားပြောဖူးတဲ့ ကဗျာဆရာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်.. မသိတော့ပါ.. ပြောပါဗျို့.. (ရှူးတိုးတိုး.. သားမေးလ်ကိုပို့လိုက်နော်.. ဘူးမှပြောဝူး.. ကတိ.. ကေလားတီတီ?)
တို့လဲ သိချင်နေတယ်၊ ခနခန လာဖတ် လာနားထောင် အဖြေရေးပီလားချောင်းနေတာ:)
ဟေး... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာတော့ အတော်ကောင်းတာပဲ.. ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ရီနေရတယ်...
မဟုတ်မှ လွဲရော့... ကဗျာရွတ်တာ... xxxx မဟုတ်လား
မမသင်း.. မယ်ကိုး.. ကိုလင်းဒီပ... ရေ
ခင်လေးလည်း သိချင်တာပေါ့... လို့
ဘာရယ်မဟုတ် နောက်ထပ်မလွဲမသွေရေးမှဖြစ်မယ့် ကဗျာတပုဒ်...
ပဟေဠိ ရဲ့ အဖြေမှန်
အသံကြောင့် သေသွားရတဲ့ သီချင်း